कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १० गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १० गते)
काठमाडौँ ०७७ जेठ १० गते
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार जेठ १० गतेसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५ सय ८४ पुगेको छ । जसमा पुरुष ५ सय ५ जना र महिला ७९ जना रहेका छन् । नेपालका ४१ जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये हालसम्म ७० जना निको भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणकै कारण बाँके र गुल्मीका एक/एक जना पुरुष र सिन्धुपालचोककी एक जना महिलाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्म प्रदेश १ का उदयपुर, खोटाङ, झापा, धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी र मोरङमा, प्रदेश २ का सबै जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा कोरोना सङ्क्रमित पहिचान गरिएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, धादिङ, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा र गण्डकी प्रदेशका नवलपरासी पूर्व, बागलुङ र लमजुङमा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन् । प्रदेश ५ का कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, बर्दिया, बाँके, रुपन्देही, दाङ र गुल्मीमा र कर्णाली प्रदेशका दैलेख र सुर्खेतमा कोरोना सङ्क्रमितको पहिचान गरिएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बैतडीमा कोरोना सङ्क्रमित फेला परेका छन् ।
प्रदेश १ मा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८६ पुगेको छ । जेठ १० गते थप एक जनामा सङ्क्रमण देखिएसँगै झापामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३६ पुगेको छ । प्रदेश १ को उदयपुरमा ३३, धनकुटामा सात, मोरङमा पाँच, सुनसरीमा दुई, खोटाङ र भोजपुरमा एक/एक जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । प्रदेश १ बाट २६ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
झापाको मेची अस्पतालको नवनिर्मित भवनलाई कोरोना अस्पतालका रूपमा विकास गरिने भएको छ । सरोकारवालाको पटक–पटकको छलफलपछि जेठ १० गते यसको अन्तिम टुङ्गो लागेको हो । प्रदेशसभा सदस्य सांसद बसन्त बानियाँले मेची अस्पतालको नव निर्मित भवन कोरोना अस्पतालका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको बताउनु भयो । कोरोना अस्पतालका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति र उपकरण प्रदेश सरकारमार्फत प्राप्त हुने सांसद बानियाँले बताउनु भयो । कोरोना अस्पतालसँगै पीसीआर प्रयोगशालाको पनि टुङ्गो लागेको सांसद बानियाँले जानकारी दिनु भयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तालिम हलमा पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालन हुनेछ ।
प्रदेश २ मा जेठ १० गते सर्लाही जिल्लाका १३ र बारा जिल्लाका एक जना गरी १४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा जेठ १० गतेसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद ७ हजार ९ सय ४५ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा ५ हजार ५ सय ४० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १ सय ७१ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । २ हजार २ सय ३४ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । जेठ १० गतेसम्म आरडीटी किटबाट परीक्षण ५ हजार ९ सय १ जनाको गरिएको छ । जसमा १२ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ भने ५ हजार ८ सय ८९ रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकास्थित निगौल माविको क्वारेण्टाइनमा रहेका २५ जना २४ घण्टाभन्दा बढी समयदेखि भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । जेठ १० गते नगरपालिकाले खानाको व्यवस्थापन नगरेपछि भोकभोकै बस्नु परेको क्वारेण्टाइनमा बसेका हरूको गुनासो छ । भारतको चेन्नई, हरियाणा तथा चन्डिगढबाट आएर क्वारेण्टाइनमा बसेका उनीहरूका लागि तातो पानी र कोठामा पङ्खाको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
बीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेशनमा उपचारत कोरोना सङ्क्रमित नौ जना जेठ १० गते डिस्चार्ज भएका छन् । अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेमा पर्साका तीन जना, बाराका दुई जना, रौतहटका तीन जना र एक जना भारतीय नागरिक रहेका डा. मदनकुमार उपाध्यायले बताउनु भयो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) आशङ्कामा यस प्रदेशमा हालसम्म २१ हजार ७ सय १२ जनामा आरडीटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ४ सय ६ जनामा एण्टिबडी पोजेटिभ देखिएको छ । यस्तै हालसम्म ७ हजार ७ सय ७५ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ । जसमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण २९ जनामा पोजेटिभ देखिएकोमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने नौ जना उपचारपछि घर फर्केका छन् । क्वारेण्टाइनको क्षमता ४ हजार ६ सय ३६ जनाको रहेकोमा ३ सय ६७ जना बसेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उच्च जोखिममा रहेका ४९ जना आइसोलेशनमा बसेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा जेठ १० गतेसम्म १ हजार ८ सय १८ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ भने १ हजार ५ सय ९३ जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । २ सय २० जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा जेठ १० गतेसम्म ७ हजार ७ सय १ जनाको र्‍यापीड डाइगनोष्टिक टेष्ट किटबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले कोरोना भाइरसविरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको १० लाख रुपियाँको बिमासहित सुविधा थप गरेको छ । लमजुङ जिल्ला स्थायी ठेगाना भइ काठमाडौँ बस्दै आएका तीन वर्षीय बालकलाइ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भए पनि परिवारजनसँग सरकारले समन्वय नगरेको परिवारका सदस्यहरूको आरोप छ ।
राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, दाङमा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट बाँकेको नरैनापुर गाँउपालिकाका २७ जना पुरुषमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ । १ सय ७७ जनाको नमूना परीक्षण गरिएकामा २७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टी भएको हो । नरैनापुर मदरसाको क्वारेण्टाइनका ६ जना पुरुष, राष्ट्रिय प्रावि गेगलीको क्वारेण्टाइनका १५ जना पुरुष राष्ट्रिय प्रावि महतनियाको क्वारेण्टाइनका ६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिकाका एक जना पुरूष सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ ।
बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज रूपैडिया नाका भएर जेठ १० गते करिब ८ सय जना नेपाल भित्रिएका छन् । भने करिब ४ सय जना भारत प्रवेश गरेका छन् ।
मर्चवारी क्षेत्रमा रहेको क्वारेण्टाइन व्यवस्थित गर्न माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले जेठ १० गते नाराबाजी गर्दै प्रर्दशन गरेका छन् । कोटहिमाई गाउँपालिका–६ बोगडी माविमा रहेको क्वारेण्टाइन व्यवस्थित नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । कपिलवस्तुमा जनप्रतिनिधि र पत्रकारमासमेत कोरोना पुष्टि भएपछि अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेकाहरू त्रसित भएका छन् ।
सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगरस्थित क्वारेण्टाइनमा राखिएका आरडीटी पोजेटिभ १३ जनामध्ये बराहताल गाउँपालिकाका दुई जना र चौकुने गाउँपालिकाका एक जना गरी तीन जनामा जेठ १० गते गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोराना पुष्टि भएको छ ।
रुकुम (पश्चिम) जिल्ला सानीभेरी गाउँपालिकाले १६ जना, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ६ जना, आठबिसकोट नगरपालिकाले ५१ जना र चौरजहारी नगरपालिकाले ३८ जनालाई उद्धार गरी क्वारेण्टाइनमा राखेका छन् । सल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका–१० को वडा कार्यालयमा राहत वितरण पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
जेठ ७ गते गौरीफण्टा नाकाबाट स्वदेश फर्किएका बैतडी जिल्लाका शिवनाथ गाउँपालिकाका २० वर्षीय एक जना, २२ वर्षीय दुई जना र २७ वर्षीय एक जना गरी चार जना पुरुषमा जेठ १० गते कोरोना पुष्टि भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेशनमा राखेर उपचार थालिएको छ ।
डोटी जिल्लाको के आई सिंह गाउँपालिकामा रहेका निर्माणाधीन विकास योजनामा काम गर्ने जिल्ला बाहिरबाट आएका ३२ जना मजदुरहरूको जेठ ९ गते दुर्गामाण्डौ स्वास्थ्य चौकी वायलमा आरडिटी परीक्षण गर्दा दुई जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि जिल्ला अस्पताल डोटीमा आइसोलेशन राखिएको छ भने पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी धनगढी प्रयोगशालामा पठाएको छ ।
कैलाली जिल्लामा जेठ ९ गते कोरोना पुष्टि भएका तीन जनालाई टीकापुर अस्पतालको आइसोलेशनमा राखिएको छ ।
डडेल्धुरा जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन आएका परशुराम नगरपालिका–१० का २८ वर्षीय पुरुषमा जेठ ९ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालका चार जना चिकित्सकसहित सात जनालाई क्वारेण्टाइनमा राखिएको छ ।
बाजुरा जिल्लामा भारतबाट आउने क्रम बढेसँगै जेठ १० गते आएका ४४ जनाको कोरोना परीक्षण गर्न आरडीटी र भीटीएम किट अभाव भएको छ ।